St. Faustina - amin'ny famoizam-po - Countdown amin'ny fanjakana
Ny resaka nifanaovana tamin'i Jesosy dia nalaina tao amin'ny diarin'i St. Faustina, Famindrampon'Andriamanitra ao amin'ny fanahiko, n. 1488:
Jesosy: Faly aho amin'ny ezaka ataonao, ry fanahy maniry fatratra ny tonga lafatra, fa maninona aho no mahita anao malahelo sy ketraka matetika? Lazao amiko, anaka, inona ny dikan'izany alahelo izany, ary inona no antony?
fanahy: Tompoko, ny antony mahatonga ny alaheloko dia satria, na eo aza ny fanapahan-kevitra noraisiko tamim-pahatsorana, dia latsaka tao anatin'ny lesoka ihany aho. Mametraka fanapahan-kevitra aho amin'ny maraina, fa amin'ny hariva kosa dia hitako ny nialako tamin'izy ireo.
Jesosy: Hitanao, anaka, ny maha-ianao anao. Ny anton'ny fianjeranao dia miankina betsaka amin'ny tenanao ianao ary kely loatra amiko. Aza avela hampalahelo anao loatra anefa izany. Miatrika an'Andriamanitry ny famindram-po ianao, izay tsy zakanao ny fahorianao. Aza adino, famelan-keloka fotsiny no tsy nozaraiko.
fanahy: Eny, fantatro izany rehetra izany, saingy nisy fakam-panahy lehibe nanafika ahy, ary nisy fisalasalana isan-karazany nifoha tato amiko, ary koa, ny zavatra rehetra dia mahasosotra sy mahakivy ahy.
Jesosy: Anaka, fantaro fa ny sakana lehibe indrindra amin'ny fahamasinana dia ny famoizam-po sy ny fanahiana mihoapampana. Ireo dia hanala anao ny fahaizana mampihatra ny hatsaran-toetra. Ny fakam-panahy rehetra mitambatra dia tsy tokony hanelingelina ny fandriampahalemana anatiny, na dia vetivety aza. Ny fahatsapana sy ny famoizam-po dia vokatry ny fitiavan-tena. Tsy tokony ho kivy ianao, fa miezaha hanao ny Fitiavako hanjaka amin'ny toeran'ny fitiavanao tena. Matokia, anaka. Aza ketraka amin'ny famotsoran-keloka fa vonona hamela anao hatrany aho. Isaky ny mangataka izany ianao dia manome voninahitra ny famindram-poko.
fanahy: Azoko tsara hoe inona no zavatra tsara kokoa tokony hatao, inona no mahafaly anao kokoa, saingy sendra sakana lehibe aho amin'ny fanaovana io fahatakarana io.
Jesosy: Anaka, tolona tokoa ny fiainana ety an-tany; tolona lehibe ho an'ny fanjakako. Aza matahotra anefa, satria tsy irery ianao. Manohana anao foana aho, koa miankina amiko rehefa miady mafy ianao, tsy matahotra na inona na inona. Raiso ny fanaky ny fitokisana ary makà amin'ny loharanon'ny fiainana — ho anao manokana, fa ho an'ny fanahy hafa koa, indrindra fa ireo izay tsy mahatoky ny hatsaram-panahiko.
fanahy: Tompo ô, tsapako ny foko feno ny fitiavanao sy ny taratry ny famindram-ponao ary ny fitiavanao manindrona ny fanahiko. Mandehana, Tompoko, araka ny didinao. Handeha handresy fanahy aho. Tohanan'ny fahasoavanao aho, vonona ny hanaraka anao aho, Tompoko, tsy ho an'i Tabara ihany, fa ho an'ny Kalvary koa. Iriko ny hitarika fanahy ho any amin'ny loharanon'ny famindram-ponao mba ho hita taratra amin'ny fanahin'ny olona rehetra ny famirapiratan'ny famindram-ponao, ary ho feno hipoka ny tranon'ny Raintsika. Ary rehefa manafika ahy ny fahavalo, dia hialoka ao ambadiky ny ampinga famindram-ponao aho.
Salamo anio (90): Tamin'ny taona rehetra, Tompo ô, ianao no fialofanay.
Avy amin'ny n. 1578:
Jesosy: Avelao ny olona izay miezaka ho tonga lafatra indrindra hiankohoka amin'ny famindram-poko, satria ny haben'ny fahasoavana omeko azy ireo dia mikoriana avy amin'ny famindram-poko. Iriko mba hanavahan'ireto fanahy ireto ny tenany amin'ny fahatokisana tsy misy fetra ny famindrampoko. Izaho manokana dia hanatrika ny fanamasinana ny fanahy toy izany. Homeko azy ireo izay rehetra ilain'izy ireo hahazoana fahamasinana. Ny fahasoavan'ny famindrampoko dia amin'ny alàlan'ny sambo iray ihany, ary izany dia ny fahatokisana. Arakaraka ny itokisan'ny fanahy iray no handraisany bebe kokoa. Ny fanahy izay matoky tsy misy fetra dia fampiononana lehibe ho ahy, satria arotsako ao aminy ny harena rehetra amin'ny fahasoavako. Faly aho fa mangataka be izy ireo, satria ny faniriako hanome be dia be. Etsy ankilany, malahelo aho rehefa mangataka kely ny fanahy, rehefa manenjana ny fony.
Avy amin'ny n. 327:
i Jesosy: Manolotra sambo ho an'ny olona izay ahazoan'izy ireo manatona fahasoavana hatrany amin'ny loharanon'ny famindram-po. Io sambo io no sary misy ny sonia: "Jesosy, matoky anao aho."
Posted in Md Faustina.
← Luisa Piccarreta - Andao…
Ny fiaviany mankamin'ny haizina →